Mitohy ny fihibohana faran’ny herinandro: voarara ny fivorivoriana ny alatsinain’ny Pantekoty | NewsMada
Par Taratra sur 17/05/2021
Mitohy ny hamehana ara-pahasalamana ho an’ny 15 andro manaraka. Mitohy tahaka izany koa ny fihibohana ny faran’ny herinandro saingy, ho an’Antananarivo Renivohitra, Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Voarara kosa anefa ny fivorivoriana ny alatsinain’ny Pantekoty, araka ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Ny Praiminisitra Ntsay Christian indray no nitafa tamin’ny mpanao gazety, omaly, nanambara ny fitohizan’ny hamehana ara-pahasalamana. Nivoitra tamin’izany fa mbola voarara ny fivorivoriana mihoatra ny olona 100 raha noferana ho 50 ihany izany teo aloha. Voarara tahaka izany koa ny fivorivoriana amin’ny alatsinain’ny Pantekoty ho avy izao, manerana ny Nosy.
Mbola mitohy koa ny fihibohana ny asabotsy sy alahady saingy ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra sy Avaradrano ary Atsimondrano, miaraka amin’ny distrikan’Ambohidratrimo ihany izany. Tsy manaraka izany intsony kosa ireo distrika hafa ivelan’ireo ho an’ny eto Analamanga. Mbola mitoetra ny “couvre-feu” saingy manomboka amin’ny 10 ora alina hatramin’ny 4 ora maraina izany.
Mbola mikatona ny fiangonana…
Mbola mitohy koa ny fikatonan’ny fiangonana sy ny “mosqué” amin’ireo distrika efatra voalaza ireo. Na izany aza, omena alalana manokana hanao fandaharana amin’ny TVM/RNM izy ireo. Misokatra kosa anefa ireo fiangonana ivelan’ireo faritra tsy mikatona ireo saingy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.
Eo amin’ny fampianarana kosa, mbola ireo mpianatra hanala fanadinana ihany no mianatra ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Efa miverina an-tsekoly kosa ireo mpianatra rehetra ivelan’ireo, amin’ny faritra efa misokatra manomboka ny alarobia 19 mey izao. Mbola mikatona ny oniversite amin’ny faritra efatra : Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony ary Anosy.
Ankoatra izany, mbola mikatona ny zotra nasionaly saingy afa-mandeha kosa ireo fiara mitatitra entana. Tsy mbola misokatra ny sidina avy any ivelany ary mbola miato koa ny sidina anatiny ataon’ny Tsaradia.
Misokatra hatrany ny tsenam pokotany afa-tsy amin’ny andron’ny fihibohana asabotsy sy alahady. Tsy mbola miasa ny marefo ary ny antsasany ihany kosa ireo afaka miasa amin’ireo orinasa mampiasa olona mihoatra ny 500.
Manampy ireo, mbola misokatra ny CTC-19 Analamanga, toy ny eny Mandriamena, Mahamasina, Soamandrakizay, Ankorondrano, Village Voara. Hakatona ny CTC Ivato sy ny eny Alarobia ka hafindra amin’ny CTC hafa ireo marary mbola tsaboina, manomboka ny 20 mey izao.
Tsy misy ny olana eo amin’ny praiminisitra sy ny filoha
Eo amin’ny resaka politika kosa amin’ny filazana fa tsy mifankahazo ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena, nambarany fa misy ny fandaminana asa eo amin’ny roa tonta. “Samy manao ny asany avy ny tsirairay. Aoka tsy handairan’ny tsaho sy lainga fa tsy misy olana na kely aza eo aminay. Zava dehibe ny fifamenoana ary tanjona ny hitondra ny firenena ho amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny filoha”, hoy izy. Nanteriny koa fa fahefana manokan’ny filoha araka ny Lalàmpanorenana ny fanovana na fanitsiana ny governemanta.